Afarta madal ee maalgashiga ah waxay bixiyaan fursado wanaagsan dhaqaalaheena ganacsiga wanaagsan. Dalxiiska ayaa qiyaastii boqolkiiba 65% ah GDP waxaana loo aasaasay in uu noqdo kan ugu sarreeya ee dakhliga soo gala.
Wershadaha labaad ee ugu horeeya ee Saint Lucia waa beeraha.
Saint Lucia waxay hirgalisay canshuur 15% ah Qiimaha Sanadka 2017, taas oo ka dhigaysa wadanka ugu dambeeya ee Bariga Caribbean in sidaas la sameeyo. Bishii Febraayo 2017 Saint Lucia waxay hoos u dhigtay Canshuur Dheeraadka ah ee Qiimaha illaa 12.5%.